Akụkọ - Ahịa Ala nchara ndị Europe na-agbake dị ka mbubata iyi egwu
Ego nchara European naghachi dị ka mbubata iyi egwu
Ndị na-azụ ahịa ihe ndị na-egwe ọka na-amalite iji nwayọọ nwayọọ na-anabatacha ihe a na-akwụ ụgwọ, na etiti / mbubreyo Disemba 2019. Ọgwụgwụ nke oge ịda mba na-adị ogologo mere ka mmelite dị mma. Ọzọkwa, mmepụta ihe, nke ndị na-akpụ ígwè ụlọ rụrụ, na njedebe nke 2019, malitere ime ka nnweta dị ike ma gbasaa oge mbufe nnyefe. Ndị na-ebubata mba nke atọ malitere ibuli ọnụahịa ha, n'ihi ụba akwụ ụgwọ ihe onwunwe. Ka ọ dị ugbu a, nkwuputa mbubata dị ihe dị ka € 30 maka otu tọn maka onyinye anụ ụlọ, na-ahapụ ndị na-azụ ahịa Europe obere ụzọ ndị ọzọ ha ga-esi nweta ya.
Ahịa nchara, na mmalite nke Jenụwarị 2020, dị nwayọ, ebe ụlọ ọrụ na-alọta site na agbatị mmemme Christmas / New Year. Amụma ọ bụla na ọrụ akụ na ụba buru amụma na ọ ga-adị obi umeala, na ọkara oge. Ndị na-azụ ahịa na-akpachara anya, na-atụ egwu na, ọ gwụla ma ezigbo mkpa na-emewanyewanye nke ọma, mmụba ọnụahịa enweghị nkwado. Ka o sina dị, ndị na-emepụta ihe na-aga n'ihu na-ekwu ọnụ ahịa karịa.
Ahịa German dị jụụ, na mbido Jenụwarị. Mills na-ekwupụta na ha nwere akwụkwọ dị mma. Mbelata ikike emere na ọkara nke ikpeazụ nke 2019, nwere mmetụta dị mma na ọnụ ahịa ngwaahịa igwe ihe. Onweghi nnukwu ọrụ mbubata e webatara. Ndị na-arụpụta ụlọ na-akwalite mmụba ọzọ na ngwụcha nkeji mbụ / mmalite nkeji nke abụọ.
Ọnụahịa igwe ihe igwe wara wara nke French bidoro ịrị elu n'etiti / mbubreyo Disemba 2019. Arụ ọrụ eburu tupu ezumike nke ekeresimesi. Akwụkwọ nke Mills mere nke ọma. N'ihi nke a, oge ebute ụzọ na-agbatị. Ndị na-emepụta EU ugbu a na-achọ itinye mmezi ọnụahịa ọzọ nke € 20/40 kwa tonne. Ahịa ụlọ ahịa na Jenụwarị malitere nwayọ nwayọ. Ahịa dị ala na-arụ ọrụ karịa ma ndị na-ekesa ahịa na-atụ anya azụmaahịa ka bụrụ afọ ojuju. Agbanyeghị, ịchọrọ n'ọtụtụ mpaghara nwere ike ịbelata, ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Ntughari mbubata, nke rurula nke oma, adighizi aba mba.
Ọnụ ọgụgụ ndị na-egwe ọka na-ewepụta ihe na Italian dị na ala, maka oge a, na ngwụsị Nọvemba 2019. Ha gbagoro ntakịrị na mbido ọnwa Disemba. N'ime izu abụọ gara aga nke afọ, achọpụtara ntụgharị ihu na ihu maka mkpa, n'ihi ọrụ iweghachi. Ọnụahịa gara n'ihu ịrị. Ndị na-azụ ahịa ghọtara na ndị na-akpụ ụrọ ahụ kpebisiri ike ịkwalite ụkpụrụ ntọala iji belata mmefu ego ha na-arị elu. Igwe ihe ndị ahụ ritere uru site na mbenata mbubata mbubata mba nke atọ, ebe ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa buliri nkwupụta ha. Oge nnyefe na-agbatị n'ihi mmepụ mmepụta oge mbụ, gbakwunyere nkwụsị / nkwụsị n'oge oge ezumike ekeresimesi. Ndị na-ebubata ngwaahịa na-ekwupụta ụgwọ mgbakwunye ọnụahịa ọzọ. Servicelọ ọrụ na-aga n'ihu na-agbasi mgba ike iji nweta oke uru a na-anabata. Echiche akụ na ụba adịghị mma.
Mmepụta nrụpụta UK gara n'ihu na-akawanye njọ, na Disemba. Ka o sina dị, ọtụtụ ndị na-ekesa nchara nọ na-arụ ọrụ tupu oge eruo maka ekeresimesi. Nri oriri, ebe ọ bụ ezumike ahụ, bụ ihe ezi uche dị na ya. Mmetụta na-adịghị mma agbasaala kemgbe ntuli aka izugbe. Ndị na-ebubata ngwaahịa na-ebubata ngwaahịa. Emechara ọtụtụ azụmahịa na ngwụcha ọnwa Disemba, dabere na ụkpụrụ ruru £ 30 kwa tonne dị elu karịa oge gara aga. A na-atụgharị hikes ndị ọzọ mana ndị na-azụ ahịa na-ajụ ma ihe ndị a ọ ga-adigide, belụsọ na ọchịchọ dịwanye mma. Ndị ahịa anaghị achọ itinye iwu buru ibu.
A ọnụ ọgụgụ nke nti price nmepe ama ada itie ke Belgium ahịa, n'oge ufọt ufọt / mbubreyo December. Mills, n'ụwa nile, jiri uru nke ntinye ntinye na-arị elu iji kwalite ọnụahịa nchara ha. Na Belgium, ndị na-azụ nchara, mechara kweta na ọ dị mkpa ịkwụ ụgwọ karịa, agbanyeghị, ihe pere mpe karịa ndị na-emepụta ígwè chọrọ. Nke a mere ka ọrụ ịzụta gaa n'ihu. Otú ọ dị, ndị na-azụ ahịa na-ajụ nkwupụta ahụ bụ na ezigbo mkpa agbanweela nke ukwuu. Ọzọkwa price hikes ejighị n'aka na nke ugbu a ahịa ọnọdụ.
Ọchịchọ ndị Spain na-achọ imepụta ihe igwe ihe na-agbanwe agbanwe ugbu a. Enwetara ụkpụrụ ntọala, na Jenụwarị. Ọnụ elu ịrị elu bidoro n'etiti ọnwa Disemba ma jigide ya, na nloghachi site na ezumike obodo. Ọ na-aga n'ihu na mbido ọnwa Disemba. Ugbu a, ụlọ ọrụ kwesịrị ịhazigharị. Ndị na-emepụta ihe na-achọ ka ọnụ ahịa dị elu maka nnyefe Machị yana ọnụ ahịa dị elu maka Eprel. Agbanyeghị, ihe dị ọnụ ala, sitere na isi obodo nke atọ, nke edere na Ọktọba / Nọvemba, na-amalite ịbịaru. Nke a nwere ike ime dị ka echekwa megide n'ihu ụlọ price hikes.
Hot Work Ngwá Ọrụ Steel gbapụtara Ewepụghị Ogwe, Tct okirikiri Hụrụ Agụba N'ihi Metal, Hss M2 okirikiri hụrụ pupụtara, Tct okirikiri Hụrụ Agụba, Tct okirikiri hụrụ UM UBARA, Hss M35 okirikiri hụrụ pupụtara,